Astaamayn - Wikipedia
Asto qoraaleed Sida aynu wada ognahay, waxa jira in af soomaaliga uu sii dhimanayo walaw la hirgaliyay astaamayntiisa waxaana u sabab ah qoris la'anta af soomaaliga iyo bahda saxaafadda oo qora waxyaaba qalad ah; waxaa kaloo jira dadkii afkeena maalayay oo aan awood u wada lahayn Afka qorshayntiisa iyo astaamayntiisa.
Astaamaynta afka maaha mid la iska maleeyo, ee waa mid lagu habeeyo aqoon cilmi ah, kadibna uu qof kasto baran karo.
Faa'iidooyinka Asto qoraaleedka
Asto waa summad ama wax shay lagu garanayo.
Astooyinka qoraalku waxa ay kala hagaan ereyada, weeraha iyo meerisyada. Sida boolisku u kala hagaan baabuurta waddada maraysa si aanay shil u gelin ayaa asto qoraalku u kala hagtaa ereyada iyo weeraha. Faa'iidooyinka Asto qoraalka waxaa ka mid ah:-
1. Qurxinta qoraalka
2. Kala haridda qoraalka
3. Soo hoorinta hadalka iyo joojintiisa
4. Muujinta xoogga iyo dareenka
5. Muujinta nooca weedha
5. Kala soocida hadalka dadka
6. Muujinta nooca weerta.
7. Muujinta eray sharraxaadeedka.
Qaybaha Asto qoraalka
1. Astaan hakad (,) waxaa loo isticmaalaa:-
Astaanta Hakad waxay qabataa shaqo wayn oo u gaar ah. waxayna kala hakisaa hadalka,waxaa kale oo loo adeegsadaa kala xadaynta waxyaalo badan oo la tirinayo ama la taxaayo.
2. Dhibic hakad (;) waxaa kale oo loo yaqaanaa (Hakad heeg) waxaana loo adeegsadaa, Astaanta dhibic iyo hakad oo laysku daray oo lays ku daray waxaa la adeegsadaa marka la doonayo in warka la sii caddeeyo, waxa ayna gashaa hakadka iyo joojiska dhexdooda.
3. Astaanta Joojis (.) Astaanta joogsigu waxa ay la fal gashaa weeraha oo ay kala qoqobtaa. Haddii aanuu jiri lahayn joojisku, hadalku waxa uu noqon lahaa, wax sn suma; weeraha ayaa isku dhici lahaa sida haddii la waayo ciidanka nabadgelyada waddoonyinka baabuurta ay isugu dhici karaan baabuurta.
Astaamaha gaarka ahEdit
Laba kolmood ( " " )
Kolmo ( ' ' )
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Astaamayn&oldid=222266"
Last edited on 30 Oktoobar 2021, at 05:47
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Oktoobar 2021, marka ee eheed 05:47.